Kedu ihe kpatara ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche | Bezzia
Maria Jose Roldan | 13/09/2021 22:39 | Mmekọrịta
Ọtụtụ ndị mmadụ na -ejikọkarị ekwesịghị ntụkwasị obi na akụkụ mmekọahụ, Agbanyeghị, ihe a maara dị ka ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta nwekwara ike ime. N'okwu a, nraranye nke onye òtù ọlụlụ na -eme n'ụzọ mmetụta. Ekweghị ekwe ekwe nke mmụọ nke m kpọtụrụ aha na mbụ siri ike ịchọpụta karịa ekwesịghị ntụkwasị obi nke mmekọahụ ma bụrụkwa nke a na -ahụkarị karịa ka ị nwere ike iche.
N'isiokwu na -esonụ, anyị ga -ekwu maka ụdị ekwesịghị ntụkwasị obi a, ihe na -ebute ya na kedu ka esi emeri ya.
1 Ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche ma ọ bụ mmetụta
2 Kedu ihe kpatara ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche
3 Otu esi emeri ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche
Ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche ma ọ bụ mmetụta
Dị ka enweghị ntụkwasị obi nke mmekọahụ, ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche bụ nnukwu nrara nye di na nwunye ahụ, ọ na -abụkarịkwa ihe na -akpalite ọtụtụ ndakpọ taa. Na ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche, enwere aghụghọ n'ebe onye òtù ọlụlụ ahụ nọ, ebe ọ bụ na enwere mmetụta mmetụta na mmetụta na -emetụta onye nke atọ. N'ọtụtụ ikpe, ekwesighị ntụkwasị obi kwuru na -eme n'ihi na otu onye mmekọ na -anọ naanị ya.
Enweghị okwukwe mmetụta uche nwere ike butere onye na -arịa ya nnukwu ihe mgbu. Enwere ike ịtụle ya nke ukwuu karịa ekwesịghị ntụkwasị obi nke mmekọahụ yana na enwere mgbahapụ kpamkpam n'ime di na nwunye nke ihe mmetụta na mmetụta. Nnukwu nsogbu na ụdị ekwesịghị ntụkwasị obi a bụ n'ihi na ọ bụ ihe siri ike ịchọpụta karịa ịkwa iko.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ma ọ bụ ihe nwere ike iduga mmadụ n'ịghọ aghụghọ n'ike n'ụzọ mmetụta uche nke onye òtù ọlụlụ ya. Enweghị nkwurịta okwu na enweghị ike ikwupụta mmetụta dị iche iche, nwere ike ime ka mmadụ kpebie ịchọta mmetụta ịhụnanya na -abụghị mmekọrịta ahụ. Enweghị ihe ịrịba ama nke ịhụnanya ma ọ bụ mmetụta ịhụnanya na di na nwunye na -abụkarị ihe ọzọ na -akpata ụdị ekwesịghị ntụkwasị obi a. Cheta na a ga -elekọtarịrị ịhụnanya kwa ụbọchị na mgbe ụfọdụ enweghị oge na -eme ka ọtụtụ ndị mmadụ kwụsị ileghara mmekọrịta ha na ndị ọzọ anya.
Ịdị na -enwekarị ihe na -adịkarị n'ime di na nwunye bụ ihe ọzọ na -ebutekarị ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche. Akụkụ nke na -ata ahụhụ dị otú ahụ, kpebie ile anya n'èzí maka ihe ọ na -enweghị na mmekọrịta ahụ. Ihe a na -emekarị bụ na ọ bụrụ na di na nwunye nwere ahụ ike ma nwee ezi nkwukọrịta n'etiti ha, ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta nke m kwuru na mbụ agaghị eme.
Otu esi emeri ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche
Dị ka mmekọahụ, ọ bụ ihe siri ike inwe ike imeri ekwesịghị ntụkwasị obi na -emetụta. N'ọnọdụ ụfọdụ, aghụghọ a na -apụtakarị njedebe nke di na nwunye na n'ọnọdụ ndị ọzọ, a na -agba mbọ ịchọta ụzọ iji chekwaa mmekọrịta ahụ. Ọ dị mkpa ịmaliteghachi nkwukọrịta dị mma ọzọ wee soro onye gị na ya na -emekọrịta ihe nke ọma.
Na mbụ ọ nwere ike isi ike mana ọ dị mkpa iwezuga iwe, iwe ma ọ bụ iwe ma nwaa iwegharị ibe ahụ ozugbo enwere ike. Ịrịọ mgbaghara na ịnabata na mgbaghara bụ isi na mkpa, ka di na nwunye nwee ike tụgharịa ọzọ na -enweghị nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Kedu ihe kpatara ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche